Midowga Yurub ayaa lagu booriyay inay joojiyaan ku tumashada xuquuqda shaqaalaha Alitalia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Midowga Yurub ayaa lagu booriyay inay joojiyaan ku tumashada xuquuqda shaqaalaha Alitalia
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Italy War Deg Deg Ah • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
ETF waxay si adag u cambaareyneysaa xaqiiqda Guddiga Yurub uu ku guuldareystay inuu siiyo wax tixgelin ah xuquuqda shaqaalaha ee hoos timaada Tiirka Yurub ee Xuquuqda Bulshada.
ITA waxay siisay iftiin cagaaran si ay ula wareegto qayb ka mid ah hawlgalada Alitalia.
Go'aanka ayaa ah xadgudub weyn oo ku yimid qabanqaabadii gorgortanka wadajirka ahaa, ururka ayaa yiri.
Go'aanka Guddiga wuxuu si toos ah u saameeyaa nolosha in ka badan 11,000 oo qof.
Xiriirka Shaqaalaha Gaadiidka Yurub wuxuu si adag u cambaareynayaa gabagabada maanta uu ku dhawaaqay Guddiga Yurub ee ku saabsan kiiska Alitalia/Italia Trasporto Aereo SpA (ITA) kaas oo siinaya iftiinka cagaaran shirkadda cusub, ITA, si ay ula wareegto qeyb ka mid ah howlaha Alitalia.
Waxaan la yaabnay in Komishanka Yurub uu si fudud ku heli karo iyada oo aan wax tixgelin ah siineynin xuquuqda shaqaalaha ayaa qaatay go'aankaas. Fikirkayaga, tani waa dharbaaxo adag iyo xad -gudub weyn oo ku yimid qabanqaabadii gorgortanka wadajirka ahaa ee sharciga ahaa ee ka jiray Talyaaniga, taas oo qarxinaysa dadaallada adag ee ururada Talyaaniga iyo loo shaqeeyayaasha si ay uga gorgortamaan qandaraasyo shaqo oo cusub. Taa bedelkeeda, mowqifka EC ee maanta wuxuu kor u qaadayaa qandaraasyada shaqada ee cusub oo laga yaabo inay yihiin kuwo aan halis ahayn. Komishanka waxaa si cad loogu wadaa wax-ku-oolnimada kharashkuna wuxuu sidaas u samaynayaa kharashka duulimaadyada joogtada ah, gaar ahaan duulimaadyada bulsho ahaan waara.
Livia Spera, Xoghayaha Guud ee ETF -ku wuxuu ku dhawaaqayaa:
Tani waxay dhirbaaxo ku tahay shaqaalaha Alitalia, qoysaskooda iyo ururradooda. Go'aanka Komishanku wuxuu si toos ah u saameeyaa nolosha in ka badan 11,000 oo qof iyo qoysaskooda iyo adeegsiga hadalada noocaas ah waa wax laga xumaado oo meesha laga saaro tabashooyinkooda. Anagoo kaashaneyna saaxiibbadeenna maanta muujiyey inay ka soo horjeedaan habkan aan caddaaladda ahayn oo aan sii socon karin, waxaan ugu baaqayaa Komishanka Yurub inay ka noqdaan bayaankooda oo ay dib u eegaan ujeeddooyinka oggolaanshahan gargaarka dawliga ah, oo aan taageerin warshadaha duulista ee waara, oo aan taageerin muwaadiniinta Yurub.
Intaa waxaa dheer, ETF waxay si adag u cambaareyneysaa xaqiiqda ah in Guddiga Yurub uu ku guuldareystay inuu siiyo wax tixgelin ah xuquuqda shaqaalaha ee hoos timaada Tiirka Yurub ee Xuquuqda Bulshada, oo ay ku jirto laakiin aan ku xaddidnayn mabaadi'da shaqo sugan oo la qabsan karo iyo wadahadal bulsheed. Intaa waxaa dheer, ETF waxay fiiro gaar ah u siineysaa xaqiiqda ah in EC uu si ula kac ah u ixtiraamayo isku day kasta oo lagu ilaalinayo qandaraasyada shaqada ee shaqaalaha si ay u kireystaan ​​side cusub, ITA.
ETF waxay si buuxda u taageeraysaa shaqaalaha Alitalia Talyaani ee maanta shaqo joojinaya, dadaalladooda ah inay dib u furaan wadaxaajoodka shaqo -bixiyaha cusub, ITA. Tani waa in la sameeyaa iyadoo la ixtiraamayo sharciga Talyaaniga, lana aqoonsanayo xaqa gorgortanka wadareed ee heer qaran.